Labo sargaal oo katirsan ciidamada DFS oo lagu dilay qarax miino oo ka dhacay meel u dhow Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaLabo sargaal oo katirsan ciidamada DFS oo lagu dilay qarax miino oo ka dhacay meel u dhow Muqdisho
Labo sargaal oo katirsan ciidamada DFS oo lagu dilay qarax miino oo ka dhacay meel u dhow Muqdisho
December 7, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Ciidan katirsan Dowldda Federaalka Soomaaliya. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Labo sargaal oo sare oo katirsan ciidamada milatariga Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dhowr kale oo askari ayaa lagu dilay qarax miinada wadada dhinaceeda lagu aasay Khamiistii oo ka dhacay koonfurta Muqdisho.
Ilo-wareedyo ciidamada katirsan iyo dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in saraakiisha oo ay la socdeen kolonyo baabuur ciidan ah ay marayeen meel u dhow tuulada Dhanaane markii uu qaraxu dhacay.
Labada sargaal ee weerarka lagu dilay ayaa lagu sheegay magacyadooda Janaraal Cumar Aadan Xasan oo loo yaqaan Dheere, oo ahaa taliyaha ciidamada guutada 12-ka April iyo ku xigeenkiisii Janaraal Cabdi Cali Jamaame. Saraakiisha ayaa hoggaaminayay howlgalo deegaanadaas looga xoreynayay Al-Shabaab..
Weerarka wax yar kadib maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada qaraxaas, sida lagu sheegay bayaan laga sii daayay warbaahinta Al-Shabaab ee Radio Andalus.
Sida wararku sheegeen, saraakiisha ayaa ku sii jeeday Muqdisho iyaga oo ka soo laabtay safar ay ku tageen saldhig ciidan oo kuyaala meel u dhow Dhanaane.
Mareynka oo dib safaaradiisa uga furaya Muqdisho ku dhawaad 30 sanno kadib
Banaanbax lagu taageerayo Madaxweyne Farmaajo oo ka dhacay Muqdisho
Madaxweynaha dowladda Puntland oo Turkiga ka codsaday in ay gacan ka geystaan gurmadka abaarta ku dhufatay Puntland
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Sabti ah magaalada Muqdisho kula kulmay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga Olgan Bekar. Kulanka ayaa ka dhacay xarunta safaarada Turkiga ee kutaala caasimada [...]
sxb wu shaqayn
axb wu shaqayn val fiiri Related PostsOctober 1, 2016 Warbixin: Daryeel la’aanta ciidamada Puntland oo keentay u adeegsiga danno gaar ahMarch 8, 2019 Hoggaamiye dhaqameed lagu dilay magaalada BoosaasoJuly 18, 2016 Deg Deg: Dagaal culus [...]
Puntland officially launches the multi-party system
Garowe-(Puntland Mirror) The Puntland government officially launches the multi-party system on Saturday. The launching ceremony took place at Puntland Development and Research Center (PDRC) in Garowe attended by the president, Abdiweli Mohamed Mohamed and the [...]